आइपीएल : पञ्जाव र दिल्लीको म्याच आज, प्लेइङ-११ मा सन्दीपको सम्भावना - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२० को आफ्नो पहिलो म्याचमा दिल्ली क्यापिटल्सले आइतबार किंग्स इलावेन पञ्जावको सामना गर्दैछ ।
दिल्ली र पञ्जावबीचको खेल साँझ ७ः४५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । पछिल्लो ५ म्याचमा पञ्जावविरुद्ध दिल्लीले एक खेलमा मात्र जित हासिल गर्न सफल भएको छ ।
पञ्जावविरुद्ध प्लेइङ-११ मा सन्दीपको सम्भावना कति?
दिल्लीले म्याच खेल्नुअघि लोकप्रिय अनलाइन इसपीएनक्रिकइन्फोले दिल्लीबाट आइपीएल खेलिरहेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्लेइङ-११ मा मौका पाउन सक्ने लेखेको छ । क्रिकइन्फोले लेखेको एक समाचार अनुसार सन्दीपले आज प्लेइङ-११ मा मौका पाउन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस आजदेखि सिपिएल शुरू हुँदै, सन्दिपको खेल कहिले ?
समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार क्रिकइन्फोले विदेशी खेलाडीको रूपमा सन्दीप, शिमरोन हेटमायर, कागिसो रबाडालाई विशेष स्थान दिएको छ । दिल्लीले चौथो विदेशी खेलाडीको रूपमा एलेक्स क्यारी, मार्कस स्टोइनिस र किमो पलमध्ये एकलाई खेलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो सिजनमा सन्दीपले दिल्लीको धेरै म्याचमा मौका पाउन सक्ने चर्चा छ । भारतीय टिमका पूर्वकप्तान सुनील गावस्करले त सन्दीपको प्रशंसा गर्दै दिल्लीले उनलाई प्लेइङ-११ मा मौका दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
लामिछानेले हालै सम्पन्न सीपीएलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले राम्रो इकोनमीमा ११ म्याचको १० इनिङ्सका १२ विकेट लिएका थिए ।
राम्रो लयका साथ यूएई पुगेका सन्दीपले दिल्लीको प्लेइङ-११ मा पर्न पाएको मौका सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दिल्लीमा उनीसहित अमित मिश्रा र रविचन्द्रन आश्विन जस्ता अनुभवी स्पिनर पनि छन् ।
दिल्ली र पञ्जावको सम्भावित प्लेइङ ११ :